Nchọpụta nsogbu Atụmatụ maka ajụkarị iMovie Issues
Apple bụ ma ama n'ihi ha anụ na a pụrụ ịdabere na ngwaahịa. iPhoto-abịa wuru na na Kacha ọhụrụ Mac OS. Dị ka mba wezụga ndị ọzọ omume, iPhoto ọrụ mgbe ụfọdụ na-eche nsogbu iji ya. Na ọtụtụ atụmatụ dị ka edezi, nkekọrịta, nchekwa eweta, usoro ihe omume nwere ike na-akpa àgwà unusually. Ma ozi ọma bụ ihe kasị n'ime nsogbu idozi na ọhụrụ melite. Ugbu a, ka anyị lee otú anyị nwere ike idozi ụfọdụ na-nsogbu nke iPhoto:
# 1. iPhoto Ga-Mbubata Pictures
Mgbe ụfọdụ iPhoto-egosi otu ihe njehie mgbe na-agbalị bulite foto na mbubata ha n'ime iPhoto. Njehie na-ekwu na i nwere otu unreadable faịlụ. I nwere ike ịgbalị ụfọdụ ọkọlọtọ ngwọta dị ka Ikwupu igwefoto na nkwụnye ya azụ ọzọ ma ọ bụ ịgbanyụ kọmputa gị. Ọ bụrụ na ndị na-adịghị idozi nsogbu, mgbe ahụ, ego diski ike gị arụmọrụ na kọmputa gị na ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na nke na-adịghị arụ ọrụ maka ị ahụ chọta ihe oyiyi, na ị na-agbalị mbubata ke ndise nchekwa emi odude ke n'ụlọ nchekwa. Mgbe ahụ, nri pịa iPhoto Ọbá akwụkwọ na họrọ "Gosi ngwugwu ọdịnaya" nhọrọ. Ọ ga-eweta gị photos ị na-agbalị mbubata. Akpali ha ka ha chọrọ ọnọdụ na kọmputa gị. Ị nwere ike mkpa ịgbanwe nche ntọala na kọmputa gị mbubata oyiyi.
# 2. iPhoto Nọgidere Na-eme akụghịna
Mgbe ụfọdụ iPhoto ọrụ ahụmahụ ugboro ugboro akụghịna ruru rụrụ arụ n'ọbá akwụkwọ, ibu na mgbagwoju nchekwa data ma ọ bụ mmerụ ọ bụla atụmatụ. Nwere ike ị chọrọ reinstall dum omume dozie a nke. Ma reinstalling usoro ihe omume ga-mkpa reimport oyiyi nile. Kama reinstalling, ị nwere ike idozi nsogbu a site ihichapụ ndepụta faịlụ nke echekwa onye ntọala dị ka ozi ọnọdụ na-akpọghachite ngwa ka ụlọ ọrụ ntọala. Ndepụta faịlụ emi odude ke mmasị gị Mac si onye ọrụ n'ọbá akwụkwọ. Chọpụta com.apple.iphoto.list faịlụ na ihichapụ ya. Ị nwere ike mkpa wughachi gị ọbá akwụkwọ mgbe a nzọụkwụ, nke bụ a pụtara dị mfe usoro. Pịa Apple na nhọrọ igodo mgbe ị Malitegharịa ekwentị iPhoto, wee họrọ wughachi n'ọbá akwụkwọ nchekwa data si akpaka azụ-elu.
# 3. iPhoto-aghọ nnọọ ngwa ngwa
iPhoto ọrụ na-enweta nnọọ iji nwayọọ interfaces maka ibu na mgbagwoju nchekwa data na faịlụ onwe ha dị mkpa ka e wughachi ma ọ bụ rụziri. Iwughachi n'ọbá akwụkwọ nwekwara ike idozi ihe ndị ọzọ metụtara iPhoto Library Database dị ka efu photos, ọbá akwụkwọ bụ unreadable, wdg na ndị ọzọ na mbipụta. Iji dozie nsogbu a, akpa ndabere gị iPhoto n'ọbá akwụkwọ. Mgbe ahụ imelite iPhoto ka ọhụrụ version ya na Software update si Apple menu. Emelite software nwere ike mma gị na onye ọrụ ahụmahụ. Ọ bụrụ na nsogbu ka na-adị mgbe ahụ ego maka apple akwụkwọ dị ka Apple enye ntụziaka a kapịrị ọnụ maka iwughachi iPhoto n'ọbá akwụkwọ.
# 4. iPhoto Face ude na-adịghị arụ ọrụ
Ọ bụ nnọọ nkịtị nsogbu na iPhoto ọrụ n'ụwa nile. Ọrụ okosobode nsogbu a ruru ka a ezumike na iPhoto Ihu nchọpụta nchekwa data. The kasị eji maka ya na-ewere ọnọdụ nsogbu a bụ na-ekere òkè na nchekwa data n'etiti multiple ọrụ na a Mac na nke a, ị nwere ike hapụ dum data nke iPhoto n'ọbá akwụkwọ nke nwekwara ike imebi iPhoto software. Ị nwere ike idozi nsogbu a site resetting nchekwa data. Iji tọgharịa, akpa, ị chọrọ ka ihichapụ ẹdude onye ahụ ike ọhụrụ otu. Mgbe ahụ Malitegharịa ekwentị iPhoto, ọ ga-ike iṅomi maka gị ihe oyiyi ruo oge ụfọdụ. Mgbe ahụ, i nwere ike iji iPhoto flawlessly.
# 5. iPhoto nri njehie
iPhoto ebelata size nke iPhoto n'ọbá akwụkwọ site ihichapụ niile oyiri foto echekwara na n'ọbá akwụkwọ. Ma, mgbe ụfọdụ iPhoto ihichapụ backups niile gbanwetụrụ ma ọ bụ na-agba gburugburu foto na thumbnail foto nke agwakọta elu na elu mkpebi foto. Nsogbu a maara dị ka iPhoto nri njehie. Nsogbu a na-adị mgbe iPhoto ngwa na-enye na-ezighị ezi ihe ọmụma banyere ihe oyiyi ọ bụla. Nsogbu na-egosi omume rụrụ arụ nke iPhoto n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ ọnụnọ nke ahụhụ na iPhoto AppleScript. Agbake na iPhoto Ọbá akwụkwọ na emelite iPhoto ka ọhụrụ version nwere ike idozi nsogbu a.
# 6. Apụghị mbubata iPhoto Library ka aperture 3
Aperture enye ohere ịpụ, MobileMe, Facebook, email, wdg na click nke a òké. Ma ọtụtụ puku ndị ọrụ na-enwe nsogbu importing iPhoto n'ọbá akwụkwọ gaa aperture 3. The njehie na-enye a ozi dị ka "importing ọba akwụkwọ si nsụgharị mbụ karịa iPhoto 7.1.5 anaghị akwado. Biko nweta nkwalite gị iPhoto n'ọbá akwụkwọ na iPhoto 7.1.5 ma ọ bụ mgbe e mesịrị. "Ma ọ bụ" e nwere ezughị free ohere na gị Aperture n'ọbá akwụkwọ olu mbubata họrọ ihe. Ọ nwere ike na-eme atụmatụ na ị mkpa ọ dịkarịa ala ihe ọzọ 1214 MB nke ohere. "Iji dozie nsogbu a, i kwesịrị nkwado ndabere na mpaghara wughachi gị n'ọbá akwụkwọ. Mgbe launching iPhoto, jide nyere n'iwu igodo na mgbe ahụ wughachi iPhoto na iji iwughachi dialog. Họrọ wughachi iPhoto n'ọbá akwụkwọ si akpaka ndabere.
# 7. Ike ịgbakwunye music si iTunes na a ngosi mmịfe kere na iPhoto
Agbakwụnye music ka ngosi mmịfe bụ oké echiche mee ka gị na ngosi mmịfe kediegwu. Ma na-agbakwunye apụghị tinye music si iTunes na a ngosi mmịfe kere na iPhoto: agbakwụnye music ka ngosi mmịfe bụ oké echiche mee ka gị na ngosi mmịfe kediegwu. Ma na-agbakwunye music si iTunes na iPhoto 11 nwere ike ugboelu dum usoro. Dozie nsogbu mbụ ịkwụsị iPhoto na ẹkedori iTunes. Pịa File na elu akaekpe nke ihuenyo. Mgbe ahọrọ Library si dobe ala menu. Họrọ Hazie Library. Wee họrọ ịhazigharị faịlụ na nchekwa "iTunes Media." Pịa Ok mezue ọrụ.
# 8. iPhoto-adịghị aghọta igwefoto jikọọ kọmputa
Mgbe ụfọdụ iPhoto apụghị ịmata igwefoto na-akpaghị aka na mkpa nchọpụta nsogbu. Tupu nchọpụta nsogbu, jide n'aka na igwefoto bụ dakọtara na iPhoto. Ụfọdụ igwefoto na-akwado dị iche iche mode na-ekwurịta okwu ahụ na kọmputa dị ka uka nchekwa mode ma ọ bụ PTP (Picture- transfer-Protocol) mode. Gbalịa dị iche iche ụdịdị jikọọ gị igwefoto ka iPhoto. Ọ bụrụ na a na-apụghị inyere aka, na mgbe ahụ imelite gị Mac OS version, iPhoto version. Emelite iPhoto version na mmelite igwefoto nkwado.
# 9. iPhoto ndabere ada ada
Ọ bụrụ na ị na-eche ihu nsogbu na nkwado ndabere na mpaghara iPhoto n'ọbá akwụkwọ karịa na-eme adịghị ndabere ozugbo. Jiri Oge igwe-ndabere gị n'ọbá akwụkwọ. Ị dị nnọọ mkpa ka ọ na na Time igwe ga-akpaghị aka ndabere oyiyi. I nwekwara ike weghachi ehichapụ ihe oyiyi na oge njem ele.
# 10. Foto dị na-egosi dị ka oghere na Faces
Mgbe na-ahazi ihe oyiyi na Faces mode, oyiyi-egosi dị ka oghere, na e nwere ntụpọ na akara gburugburu onu nke ohere. Akpa ego ma ọ bụrụ na ị pụrụ ịhụ ihe oyiyi na ịpị dotted ide ohere. Ọ bụrụ na ị na-ahụ na ihe oyiyi ahụ gị thumbnail si nchekwa data n'ọbá akwụkwọ nke iPhoto na-emerụ. Wughachi gị iPhoto thumbnail nchekwa data idozi nsogbu a. Iji mee otú ahụ, jide iwu isi na nhọrọ isi n'otu oge na abụọ pịa iPhoto akara ngosi. Site window gbapụta Jiri "wughachi Thumbnails" nhọrọ. Ọ ga-ewughachi gị thumbnail nchekwa data.
Ya mere, anyị pụrụ ịtụ anya na ọ ga-nnọọ uru n'ihi nchọpụta nsogbu gị iPhoto nsogbu.
Adobe Systems: Adobe Photoshop Ihe maka Mac
> Resource> Mac> Nchọpụta nsogbu Atụmatụ maka ajụkarị iPhoto Issues